Himalaya Dainik » महादेवको त्यो विकास विरोधी कदम !
षिवर ! के भएको छ आज तपाईंलाई ? सम्पत्ति नै हराए जस्तो गरी अँध्यारो अनुहार लगाउँदै हुनुहुन्छ । बिहानैदेखि न जपमा ध्यान दिनुभएको पाएकी छु, न ध्यानमा ध्यान लागेको देखेकी छु । खाना खानै तीनचोटी बोलाइसकें । मध्याह्न हुन लागिसक्यो पटक्कै सुन्नुभएको होइन,’ बलेसीको ओझेल देखाउँदै अरुन्धतीले भनिन् ।
‘आ जेसुकै होस्, न दुःखेको कपालमा कसले डोरी लगाओस् । हामीसँग के नै त्यस्तो सम्पत्ति छ र कसैको आँखा लाग्ने । तपाईंसित विद्या धन छ, जसलाई कसैले लाँदैनन् । लगेछन् नै भने पनि सकिने होइन, मेरो साथमा त त्यो पनि छैन । मेरा निम्ति सर्वस्व भनेकै यही आश्रमको आकाश र तपाईंको सेवा नै हुन्,’ सहजभावमा प्रस्तुत हुँदै अरुन्धतीले भनिन् ।
‘ठीक भन्यौ, हामीसँग भौतिक सम्पत्ति छैन तर मैले भनेको भौतिक होइन, आध्यात्मिक सम्पत्ति हो । आज अतीतको त्यही डरलाग्दो क्षणले झस्काइरहेको छ । न जपमा मन लागेको छ, न ध्यानमा ध्यान गएको छ,’ विवशता व्यक्त गर्दै वशिष्ठले भने । ‘कस्तो डरलाग्दो क्षण ? तपाईंं जस्ता वीतरागीलाई पनि तर्साउन सक्ने क्षणबारे म पनि जान्न सक्छु ?’ अरुन्धतीले जिज्ञासा राखिन् ।
‘हो तिमीले भनेको केही हदसम्म सही हो असुरहरूले अलि बढी हतार गरेकै हुन् तर यसको अर्थ यो होइन कि जरैदेखि उखेलेर फाल्नु । असुरहरू प्रकृति विरोधी होइनन्, थिएनन् पनि । म त भन्छु निरन्तर अघि बढ्ने प्रकृतिको धर्म हो भने उनीहरूले त्यही कार्यलाई नै सहयोग गरिरहेका थिए ।
पहिले नदीहरूमा डुंगाबाहेक केही थिएन, जुन बरोबर दुर्घनामा पर्थे । घरहरू कच्ची हुन्थे, जसमा सदा हुरी, बतास र आगलागीको जोखिम रहन्थ्यो तर असुरहरूले जतिबेला फलामको खानी पत्ता लगाएका थिए त्यतिबेलादेखि भने यस क्षेत्रको कायपलट भएको मात्र थिएन, आगामी दिनका लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धानको ढोका समेत खोलिदिएका छन् ।
सुनेको थिएँ उनीहरू त्यस्तो चामत्कारिक युगको समेत विकासमा लागेका थिए रे जहाँ एक पटक बोलिएको कुरा जस्ताको तस्तै वर्षौैंसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ । तिमी नै भन त अब कसले गर्ने यसको भरपाई ? लौ मानौं एकछिनलाई असुरहरूले नचाहिने काम नै गरेका थिए रे ! त्यसै हो भने पनि महादेवले जस्ताले सम्झाइबुझाई गरी रोक्नुपथ्र्यो ।
उनीहरू महादेवका भक्त थिए । उनले भनेपछि पक्कै मान्ने थिए तर महादेवले न दायाँबायाँ हेरे, न कसैका कुरा सुन्नै चाहे । एकाएक भीमसेन लिंड्को लगाई विकासप्रेमी असुर सभ्यतालाई नै पश्चिम समुद्रमा डुबाइदिए । सम्झँदा अहिले पनि भित्रैदेखि मन कोक्याएर आउँछ,’ वशिष्ठले नैराश्य व्यक्त गरे ।
‘त्यो त बुझियो तर तपाईं जस्ता त्रिकालदर्शी महर्षिलाई यत्ति कुराले कसरी त्यति बढी बेचैनी गरायो त्यो भने बुझ्न सकिएन … ।’ अरुन्धती थप बोल्न खोज्दै थिइन् वशिष्ठले बीचमै रोकेर भने, ‘हामी समाज सुधारक हौं, बाटामा लागेका जुनसुकै ठेस पनि हाम्रा लागि असह्य पीडादायक हुन्छ ।’ आपसमा यस्तै गन्थन चल्दाचल्दै कति बेला घाम अस्ताएछन् वशिष्ठ र अरुन्धतीले पत्तै पाएनन् । उठेर हिँड्न खोज्दै थिए तर प्रच्छन्न अन्धकारका कारण कतै केही देख्न सकेनन् ।
युवतीलाई ट्रकमा लगेर बलात्कार गर्ने तिन जना पक्राउ
बुधले यसरी गर्दैछ राशि परिवर्तन, जान्नुहाेस्